Dagaal khasaaro dhaliyay oo dhexmaray Macawisley iyo ciidamo Itoobiyaan ah |
Ilaa haatan ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas’uuliyiinta heer maamul iyo mid Federaal oo xaqiijiyay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi.
Waa kuwama “Macawisleyda”?
Maleeshiyaadka “Macawisleyda” waxay soo shaac baxeen sannadkii 2014-kii, waxay ka bilowdeen qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo dagaal culus ay Al-Shabaab kula galeen.
Dhammaan, “Macawisley” uma tababarna dagaalka balse waxay ku dhiiran yihiin in ay si wataan dagaalkooda ka dhanka ah kooxdaas.
Qaar ka mid ah odeyaasha deegaanno ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in aysan u dul qaadan doonin dhibaatooyiinka ay ku hayaan Al-Shabaab isla markaana ay ka mid noqdeen malleeshiyaadka “Macawisleyda” si ay isaga difaacaan ururka Al Shabaab.